नेपालमा भेटियो मान्छे छिर्ने सानो अनौठो प्वाल, छिर्दा छिर्दै मान्छे अड्किएपछि यस्तो भयो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
जानकारी धर्मदर्शन भिडियो समाज
February 1, 2021 AdminLeaveaComment on नेपालमा भेटियो मान्छे छिर्ने सानो अनौठो प्वाल, छिर्दा छिर्दै मान्छे अड्किएपछि यस्तो भयो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
खोटाङ जिल्लामा अवस्थित हलेसी महादेव हिन्दू, किराँत र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल हो । हिन्दूहरूले पूर्वको पशुपतिनाथ मान्ने यो धार्मिक स्थललाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दोस्रो लुम्बिनी मान्छन् भने किराँतहरूले आदिम भूमि मानेर पुज्छन् ।
तीनै धर्मावलम्बीको आस्थाको त्रिवेणी बनेको हलेसी महादेवको दर्शन गरेमा दुःखबाट पार पाइने र निःसन्तानको काख भरिने जनविश्वास छ । बसाहा, हलेसी र भैरव गरी तीन वटा गुफा रहेको मन्दिरमा महाशिवरात्रि, रामनवमी र बालाचतुर्दशीमा मेला लाग्छ । अन्य समयमा शनिबार बिहान दर्शनार्थीको घुइँचो हुन्छ ।
धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य हलेसी प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि पनि प्रख्यात छ । सडक सञ्जालले जोडिएपछि आन्तरिक पर्यटक जाने क्रम बढेको छ । छिमेकी देश भारत र चीनबाट समेत भक्तजन आउँछन् ।हलेसी महादेवमा रहेका बिसेषकुराहरु हामीले तल भिडियोमा देखाएका छौ , हेरेर सबैले सेयर गर्नुहोला ।
भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस
कार्यालय मै गएर ज्ञानेन्द्र शाहीले मुख्यमन्त्रिलाई सोधे – ‘सभामा सम्बोधन गर्दा मेरो खुट्टा किन भाचियो’ ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल माघ २१ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ फेब्रुवरी ०३ तारिख